I-GP yeeMveliso zeNdalo Co., Ltd. ithathe inxaxheba kwi-China Acrylate nakwi-Methyl Ester Industry Chain Forum kwi-2021
I-2021 China Acrylate kunye neMethyl Ester Industry Forum yeNtengiso (18th) iya kubanjelwa kwi-Intercontinental Hotel Century Izulu Chengdu, kwiPhondo laseSichuan, China, iintsuku ezintathu (ngo-Epreli 21-23, 2019). Njengomzi mveliso, abaxhasi be-BBS kunye neengcali, izifundiswa kunye nomntu ochaphazelekayo ophethe o ...
Lungisa i-polymerization engaphambili ukufezekisa iipropati zezinto eziphathekayo
Isilumkiso! Ukubonelela ngamagosa osasazo afanelekileyo ngokufikelela okuhlawulelweyo kwiinkonzo ezithembekileyo zokukhululwa koonondaba. Ividiyo: ibonisa ukupolishwa ngokukhawuleza kusetyenziswa i-monomers 1,5-cyclooctadiene kunye ne-dicyclopentadiene. bona ngakumbi Abaphandi kwiDyunivesithi yaseIllinois eUrbana-Champaign bayiphucule i-polyme yangaphambili ...
Intengiso yeGuar (kwiGuar Gum) kwintengiso: Inkqubela phambili kwezobuchwephesha, uMceli mngeni kunye nohlalutyo lokukhula, uqikelelo ku-2026
Oku kuzise utshintsho. Le ngxelo ikwachaza ifuthe le-COVID-19 kwintengiso yehlabathi. Ingxelo yeMarike yeGuar Gum (Guar Gum) ivavanya yonke imiba yeemarike zehlabathi ngokweenkcukacha. Ibonisa ukuba ngaphandle kokutshintsha kweemarike kunye neendlela eziguqukayo, intengiso isakhula ngokuzinzileyo. Th ...
I-Glycidyl methacrylate yokubeka esweni amathuba emarike ngo-2030
Inkampani yeGlycidyl methacrylate yentengiso ipapashe iingxelo ezingenakubalwa, ngaphandle kokuthandabuza ukubonelela ngeenkonzo kubathengi esele bekho kwihlabathi liphela. Iqela lethu elizinikeleyo leengcali libonelela ngeengxelo ezinedatha echanekileyo ekhishwe kwimithombo ethembekileyo. Silandela umbane wedijithali-ukubonelela abathengi ...
Guar Gum Market 2021 Ubungakanani boShishino lweHlabathi, iNkcazo, ukwahlulahlulwa, iRhafu kunye noQikelelo ukuya ku-2027
IFort Collins, eColorado: Ingxelo yentengiso yentsini ye-guar yakutshanje ibonelela ngovavanyo olubalulekileyo lwabaqhubi bokukhula ababalulekileyo, amajelo avelayo, iindlela zotyalo-mali kwiimarike zengingqi eziphambili, kunye nomhlaba okhuphisanayo wemimandla eyahlukeneyo kunye nezicwangciso zabadlali abaphambili. Isifundo sikwabonelela ngokuqonda ...
Uhlalutyo lwentengiso lwe-Glycidyl methacrylate kunye nefuthe lazo kwi-COVID-19, iinkampani ezinkulu, imikhwa, isikali, ukukhula, isabelo, imfuno kunye nembonakalo yamathuba exesha elizayo
Ukusuka kumbono wabenzi, imimandla, iintlobo zemveliso kunye nemizi-mveliso yokugqibela, ubume kunye nendawo ekuyo kwi "Market Market yeGlycidyl Methacrylate" (2021-2026) kwihlabathi jikelele nakwimimandla ephambili; Le ngxelo ihlalutya iinkampani eziphambili kunye nezo ziPhezulu kummandla, zahlulahlula ...
Ubungakanani beNtengiso yeGar Gum ngo-2021 | Uhlalutyo, uMbono woMmandla, iSicwangciso soKhuphiswano kunye noQikelelo ukuya ku-2027
IFort Collins, eColorado: Imarike yeGuar Gum ka-2021 ibonelela ngophando olunzulu kwimbali nakwizinto ezibalulekileyo zeshishini leentsini. Ingxelo yentengiso yeentsini ze-guar iqulethe uhlalutyo lweendlela ezikhoyo zeshishini kunye namandla okuthengisa, anokusetyenziselwa ukwenza imephu yophuhliso lwemarike yeentsini. Uphando ...
Imfuno ekhulayo ye-glycidyl methacrylate (GMA) yentengiso ikhokelela ekukhuleni okubonakalayo kwi-CAGR ngo-2027
Ingqondo yophando ngeNtengiso ipapashe ingxelo entsha enesihloko esithi "Intengiso yeGlycidyl Methacrylate (GMA)". Ingxelo ibonelela ngohlalutyo olubanzi lweendlela eziphambili zokukhula, amandla okuqhuba, amathuba, iindawo eziphambili, uhlalutyo lwemikhosi emihlanu kaPorter kunye nembonakalo yokhuphiswano. Olu phando ...
IGlycidyl Methacrylate (GMA) Ubungakanani beMarike ka-2021 | Ukwabelana ngamaShishini kwiHlabathi liphela, Icebo lokuKhuthaza amaShishini, iNqanaba leCAGR, amaThuba okuKhula kunye noQikelelo ku2027
ENew Jersey, eUSA-Ingxelo yophando lwentengiso lwakutshanje olunesihloko esithi "Glycidyl Methacrylate (GMA) Market" icwangcise ngocoselelo ezona zinto ziphambili zophando lwemarike yeGlycidyl Methacrylate (GMA). Ingxelo iqhube uphando olunzulu lwentengiso ye-glycidyl methacrylate (GMA), egxile ...
Ukungeniswa kweDallas: Amalungelo awodwa omenzi wechiza ali-111 anikezelwe kwiveki kaJanuwari 21 »Izinto zaseDallas ezintsha
IDallas-Fort Worth ibekwe kwindawo yeshumi kwimisebenzi yamalungelo awodwa omenzi wechiza phakathi kweenqila ezingama-250. Amalungelo awodwa omenzi wechiza anikezelweyo abandakanya: • imbono emxinwa ye-Apple yokuhlalisana kwizixhobo • I-Capital One yokufumana umhlaba ukubekwa kwezinto ze-AR • CareView Communications 'indlela yokusebenzisa intshukumo ...
FACTBOX: I-US Gulf Coast inyibilikisiwe kwaye iipetrochemicals ziqala ixesha elide kwakhona
U-Ira Joseph noRyan, iintloko zamaxabiso epetroli nombane kwi-S & P Global Platts… Isibhengezo sePlatts Commodity siza kubhala amaziko ngamanqanaba mihla le, kubandakanya iindaba zamva nje, iindaba zamva nje, ulwazi olunzulu ngemisebenzi yethu kunye nesishwankathelo sotshintsho olutsha platts.com ...
Iilebhu ezisetyenziselwa uphando lwezenzululwazi zithatha iindlela ezininzi ngenxa yokwahluka. Sinikeza inkqubo epheleleyo yokubhobhoza.
IZhutai Industrial Zone, Isithili saseLinzi, Shandong, China